maxkamad amartay in la soo xiro wadaad - BBC Somali
maxkamad amartay in la soo xiro wadaad
Wadaadka Abdul Aziz waa wadaad xagjir ah oo lagu bartay afkaatiisa uu ku taageero Taliban.
Horraantii sanadkan, maktabad ku taala iskuul uu maamulo wadaadka aya magaca laga badelay oo loo baxshay maktabada Osama Bin Laden.
Boqolaal qof ayaa todobaadkii la soo dhaafay dibed ka hor dhigay masjidka cas kaddib markii wadaadka uu ka baaqsaday in uu cambaareeyo weerarkii Talibaan ay ku qaaday iskuulka ku yaalay Pashawar, weerarkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof oo u badnaa caruur dhiganaysay iskuul.
Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada ayaa dacwo geeyey maxkamada waxayna sheegeen in ay u cagajugleeyeen shaqaalaha masjidka intii uu socday dibed baxa.
Dadka dibed baxa dhigay ayaa iyaguna la baaraayaa oo waxa loo haystaa in ay dhigeen dibed bax sharci daro ah.
Afhayeen u hadlay masaajidka ayaa sheegay in ay is hortaagi doonaan haddii la isku dayo in la soo xiro wadaadka. Weli ma cadda in la dhaqan gelin doono warqada loo jaray wadaadka ee lagu soo xirayo.
Kaddib wixii ka dambeeyey carada laga muujiyey weerarka Pashawar, xukuumadda ayaa u muuqata in ay doonayso in ay muujiso in ay daba galaysao oo ay talaaba ka qaadayso islaamiyiinta iyo taageerayaashooda.